प्रधानमन्त्री विरुद्ध अनसन बस्ने राजेन्द्र लिङ्देनको चेतावनी
२०७५ माघ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
'कम्युनिष्ट सरकारका कारण देश संकटमा'
२०७५ माघ २५ शुक्रबार, प्रधानमन्त्री के. पी. ओली नेतृत्वको सरकार गठनसंगै देश गम्भीर संकटमा पर्दै गइरहेको छ । देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई लत्याउँदै अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्रलाई चिढ्याउदै अन्य कुनै राम्रोसंग दौत्य सम्बन्ध स्थापित नभएको राष्ट्रको पक्षधर भई नेपाललाई किन संकटमा पार्न खोजिदै छ ? यस सम्बन्धमा भरपर्दो जवाफ चाहियो ? ... बाँकी अंश»
नयाँदिल्लीमा बन्धक बनाएर राखिएका नेपाली महिलाबारे चासो देखाउन सरकारसँग माग
२०७५ माघ २५ शुक्रबार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ... बाँकी अंश»
'वाईडवडीमा भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार बुढीगण्डकीमा भएको छ, छानविन होस्'
२०७५ माघ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद राम बहादुर विष्ट वाईडबडी काण्डमा भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ ... बाँकी अंश»
२०७५ माघ २४ बिहिबार, रुपन्देही । कार्यसूचीमै नभएको विषयमा कांग्रेसले प्रदेश न. ५ प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको भन्दै सत्तापक्षका सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
सत्य निरुपण संशोधन विधेयक पारित
२०७५ माघ २३ बुधबार, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई पारित गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयक पेश गरेका थिए। त्यसअघि उक्त विधेयकमा सम्बन्धमा परेका संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। ... बाँकी अंश»
रक्षामन्त्रीले भनेको 'पाँच दिन' कहिले आउँछ संसदमा गगनको प्रश्न
२०७५ माघ २३ बुधबार, काठमाडौं। सांसदहरुको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीहरुको उत्तर गराउने अभ्यास प्रतिनिधि सभाले शुर गरेको छ। सांसदहरुले लिखति रुपमा संसद सचिवालयमा प्रश्न राखेपछि आवश्यक्ता अनुसार प्रश्नोत्तर गराउनेछ। ... बाँकी अंश»
सांसदको गुनासो ‘प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनामा भ्रष्टाचार भयो, अख्तियारले कुरै सुनेन’
२०७५ माघ २३ बुधबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् । ... बाँकी अंश»
चार मन्त्री संसदको कठघरामा, ११६ प्रश्न
२०७५ माघ २३ बुधबार, काठमाडौं । नयाँ संसदीय प्रणालीअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा चार जना विभागीय मन्त्रीहरुले संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ माघ २२ मंगलबार, खस्यौली । प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी तथा नामकरणको विषयमा मंगलबार सभामुख र प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यबीच भनाभन भएको छ । ... बाँकी अंश»
विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत
२०७५ माघ २० आइतबार, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ प्रस्तुत भएको छ। बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसअघि उक्त विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्र ... बाँकी अंश»
दुबै संसदमा पेश भएको बेपत्ता छानविन र सत्यनिरुपण विधेयकमा के छ ?
२०७५ माघ २० आइतबार, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा समेत द्वन्द्वकालीन समयमा वेपत्ता ... बाँकी अंश»
गगनको चेतावनी : 'काँग्रेस के हो अब देखाउँछौं, आश्चर्य चकित बन्ने पालो सरकारको' (भिडियो)
२०७५ माघ २० आइतबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले प्रतिपक्ष कहाँ छ ? भनेर प्रश्न गर्ने सरकारलाई प्रतिपक्ष के हो ? भनेर देखाउने चेतावनी दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
काठमाडौंबाट बाजुरा पुगेको संसदीय टोली घटनास्थल नपुगि बाटोबाटै फर्कियो
२०७५ माघ १९ शनिबार, बाजुरा । छाउपडी प्रथाबारे स्थलगत अध्ययनका लागि बाजुरा आएको प्रतिनिधिसभा सामाजिक विकास समितिका सांसदको टोली सम्वन्धीत क्षेत्रमा पुग्न नसकेरै फिर्ता भएको छ। ... बाँकी अंश»
‘गरीबका छोराछोरीले पढ्न पाउने गरी ऐन आयो’
२०७५ माघ १७ बिहिबार, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले वर्तमान सरकारले गरीबका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउने ऐन ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि काँग्रेसको अवरोध
२०७५ माघ १७ बिहिबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अवरोध जनाएको छ । ... बाँकी अंश»